I-quartz kunye neewotshi zoomatshini ezineempawu ezixhumeneyo
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Olona lawulo luhle kakhulu lwe-hybrid kunye nemisebenzi efanelekileyo: iziqwenga ze-Analog zehlabathi zedijithali
Olona lawulo luhle kakhulu lwe-hybrid kunye nemisebenzi efanelekileyo: iziqwenga ze-Analog zehlabathi zedijithali
Bona ixesha elingentla? Ewe, ayizizo iiwotshi ezilumkileyo, kodwa ... iwotshi ekrelekrele. phelelisa ukubonakala kwayo nayiphi na inene okanye inenekazi. Okwangoku, kunzima kwaye ukuyikhanyela into yokuba umntu unokuxhamla kuphela kwizinto ezithile zewatchwatch yanamhlanje.
Ukunyaniseka, ii-smartwatches kunye nookhokho babo be-analogue bebekhona okwexeshana ngoku, enye ingaphezulu kwenye, kodwa ezi azifane zixube. Ewe iiwotshi ze-analogue azikho krelekrele kangako, kodwa zine charisma ethile engenakuphikwa, kwaye zihlala ziyilo lwesitayile esincedisa ukubonakala kwayo nayiphi na inene okanye inenekazi eliyinyani. Okwangoku, kunzima kwaye ukuyikhanyela into yokuba umntu unokuxhamla kuphela kwizinto ezithile zewatchwatch yanamhlanje.
Kodwa kwenzeka ntoni xa umenzi weklasikhi ye-analogue yeklasikhi ethatha isigqibo sokucoca izinto kancinane ngokufaka ezinye zeempawu ezintle kuyo nayiphi na iwotshi ye-analogue? Ewe kuyenzeka:
I-Fossil yinkampani eyaziwayo yokwenza iwotshi eyaziwa kakhulu ngeewotshi zayo ze-analogue, kodwa sele ithathe indawo yokungena kumhlaba we-smartwatch. Inezinxibo ezimbalwa kwiphothifoliyo yayo, kwaye eyona inomdla ngakumbi kwezi yi-analog Q Grant kunye ne-Q Pilot. Ezi ziwotshi ziqhelekileyo zoomatshini, kodwa zinobuninzi boluvo ebhodini, kunye nokukhanya okuqaqambileyo, kwemibala emininzi yesaziso se-LED emazantsi etyala. Imoto eshukuma nayo iya kukwazisa ngayo nayiphi na into engeniswa elizweni.
Eziwotshi zeFossil ziya kulinganisa iikhalori ozitshisileyo kunye namanyathelo owathathileyo; Ukongeza, unokuseta umbala owahlukileyo kwinkqubo nganye evunyelweyo ukutyhala izaziso kwiwotshi yakho. I-Bluetooth 4.1 LE isetyenziselwa unxibelelwano; Zombini izixhobo ze-iOS kunye ne-Android zinokudibana neewotshi. Kukho ibhetri ye-27mAh ngaphakathi kwe-Q Grand kunye ne-Q Pilot, eya kuhlala kangangeentsuku ezisi-7. Yazi ukuba le bhetri inika amandla imisebenzi yeewotshi-ayizukuyeka ukukubonisa ixesha elichanekileyo, njengoko zinentshukumo ye-quartz.
Uyilo-lobulumko, i-Fossil yenze iiwotshi zayo zokubethela ezixineneyo ukuba ziye kufikelela kwi-3ATM. Ityala elingama-44mm elijikelezileyo liyi-15mm elingqingqwa kwaye lenziwe ngentsimbi engenasici; Ungayibhangqa nayo nayiphi na umtya oqhelekileyo we-22mm. Jonga amaxabiso kunye neenguqulelo ezikhoyo ngezantsi.
Ngeentsimbi HR kunye neentsimbi HR Sport
Ngoku ukuba ii-Withings zisandula ukuqhawula umtshato neNokia, ii-smartwatches zayo ezingashukumiyo kakhulu ziyaphinda zithwale amagama awaziwa ngcono. Eyona smartwatch ibalaseleyo kulungelelwaniso lwayo ngoku ayikho enye ngaphandle kweMidlalo ye-HR HR, enxibe kakuhle kakhulu eyenzelwe abantu bezemidlalo abangadibanisi kuphela i-aesthetics kunye nokuhamba kwewotshi yakho yemveli kunye nobukrelekrele besixhobo esihambelanayo, kodwa iza kwakhona ngesilumkiso esibuhlungu esisezantsi, nto leyo engaqhelekanga kakhulu kwiiwotshi eziqhelekileyo.
I-Steel HR inobungqina bamanzi ukuya kuthi ga kwi-5ATM, inobomi bebhetri yeentsuku ezingama-25, kwaye okona kubaluleke kakhulu, umboniso wesetyhula odibeneyo ukubonisa naziphi na izaziso ze-smartwatch onokuba nazo kunye nenkcitho yakho yekhalori, amanyathelo athathiweyo, Ekugqibeleni, ukubetha kwentliziyo yakho. Kulungile & apos, lilungelo, i-'HR 'kwigama elinxibayo & apos; igama libonisa ukubetha kwentliziyo, nto leyo engafakwanga kwi-smartwatches. Inokuthanjiswa ngokwendabuko okukunika ukuqonda kwinkqubela yakho yemihla ngemihla. Ezinye zezinto ezinxibwayo kunye nezinye izinto kubandakanya ukulandela umkhondo wokulala kunye nokufumanisa ngokuzenzekelayo inqwaba yezemidlalo kunye nemisebenzi (nkqu igalufa).
Ngaphandle kweyantlukwano yoyilo, umahluko wokwenene phakathi kweNsimbi ye-HR kunye neMidlalo ye-HR HR yinto yokuba le yokugqibela ikuvumela ukuba ulinganise i-VO2 Max yakho, eyeyona nto isetyenziswa kakhulu kwioksijini yomntu kwaye ibalulekile kwiimbaleki nakwiimbaleki.
Umenzi weewotshi waseDanish uSkagen uneewatchwatches ezimbalwa kulungelelwaniso lwayo, kodwa ikwanalo neqela leewotshi ezibalaseleyo ze-hybrid ngokunjalo. I-Skagen Jorn ibambe umdla wethu ngobuhle bayo obucocekileyo kunye nezinto eziluncedo ezixhumeneyo, njengexesha elizenzekelayo kunye nohlengahlengiso lomhla, umsebenzi kunye nokulandela umkhondo weenjongo, ukulandela umkhondo wokulala, i-imeyile ehluziweyo kunye nezaziso zombhalo, umsebenzi ophindwe kabini, ovumela umntu onxibileyo ukuba athabathe ifoto, lawula umculo wabo kunye nokunye-konke ngokucofa iqhosha. Ayisiyonto ilayishayo kulayishwa ukunxiba.
Ukunxiba kuyamelana namanzi ukuya kuthi ga kwi-3ATM kwaye kunebhetri yeseli esemgangathweni eya kuhlala phakathi kweenyanga ezi-4 ukuya kwezi-6. Iyancomeka! Ngelixa kuyinyani ukuba iimpawu zomlindo azikho njengee & apos; smart 'njengezinye iiwotshi zohlobo olufanayo, sisavakalelwa kukuba ibonelela ngolungelelwaniso oluhle kakhulu phakathi kweempawu, inkangeleko, kunye nexabiso lilonke. Ungayifumana lewotshi kwimibala eyahlukeneyo eyahlukeneyo, kunye neyona mibala mikhulu iboniswe apha ngezantsi.
UGarmin Vivomove HR
I-Garmin ithandwa kakhulu zii-smartwatches zayo ezijolise kwezemidlalo, kodwa akufuneki silibale ukuba inezinto ezinxibekayo ezingumxube nazo. I-vivomove HR yeyona siyincomayo, njengoko ingakhangeleki iyothusa kuphela kodwa ikwanendawo encomekayo yokuseta. Eyona nto ibaluleke kakhulu, inescreen esibonakalayo esibonakalayo esibonisa izaziso zefowuni kunye nolunye ulwazi olulandelelweyo xa uyifuna. I-apos; isikrini sokuchukumisa, khawukhathalele, ngenxa yoko ujikeleza ngokuswayipha ngomnwe wakho kwaye ungacinezeli amaqhosha ecaleni.
Ukuya kuthiwani ukuba yeyiphi idatha elandwayo, ngaphandle kwamanyathelo aqhelekileyo, ukubetha kwentliziyo, kunye nemigangatho enyukayo, ufumana izixhobo ezithile zokujonga ukomelela okunje nge-VO2 Max kunye nobudala bokuqina, eziphakathi kwezona zinto zibalulekileyo uGarmin abonakala enebhongo ngazo. Imilinganiselo ye-VO2 Max sisiseko seewotshi zokomelela komzimba kunye nezinto ezithandayo, ke ukuba nolu phawu lukhulu ngokupheleleyo.
Ngokubhekisele kubomi bebhetri, abo banxibayo banokufikelela kwiintsuku ezintlanu kwiVivomove HR kwimowudi yayo engagqibekanga ukuya kuthi ga kwiiveki ezi-2 kwimo yokubukela nazo zonke izinto ezi-smart zicinyiwe. Kuvakala ngathi wena & apos; d ufuna ukuyisebenzisa kwimowudi ye-smart ngalo lonke ixesha njengoko ukulungelelaniswa ngokubhekisele ekusebenzeni ngokubanzi akunakulunga kunyamezelo olude kangako kwimowudi yokubukela kuphela. Ukongeza, isikrini sokuchukumisa yindawo enkulu yokuthengisa apha, kwaye ukuba ikhubazekile kuya kuba yinto engaqhelekanga.
node js molo mzekelo wehlabathi
Ukulungiswa kweglasi eyaphukileyo ye-iPhone 8 iindleko ezingaphezulu kakhulu kunokutshintsha isikrini sayo
Eyona Ndawo yokuthenga ine-Samsung Galaxy S III yeVirgin Mobile efumanekayo yoku-odola kwangaphambili, $ 399
I-Google Pixel 2 ethi 'Ngoku iyadlala' ihlala ikwimeko yokwamkelwa komculo ayizukufumana ibhegi yeebhetri
I-T-Mobile kunye neapos; Isicwangciso esitsha esingenamda sokuthetha kunye nesicatshulwa siza kungabikho datha kwaye kuxabisa i $ 25 ngenyanga
Eyona meko ye-kickstand ye-Samsung Galaxy S7
Ikhilikithi yokubonelela nge-intshi ezi-6 ze-ZTE Grand X Max ngee- $ 199 ukuqala ngoLwesihlanu